Song Hye Kyo ဆီကနေ တရားဝင် ကွာရှင်းခွင့် တောင်းခံလိုက်တဲ့ Song Joong Ki - For her Myanmar
by Ei Mon
ဟဲ့… ပလုတ်တုတ် စောစောစီးစီး ဘာတွေလား T.T
အိပ်ရာနိုးလို့ လိုင်းဖွင့်ကြည့်ရုံပဲ ရှိသေးတယ်။ တက်လာတဲ့ သတင်းက လုံးဝ shock ပဲ။ ကိုယ် နှစ်ရှည်လများ ချစ်ရတဲ့ မင်းသမီး ၊ လိုက်ဖက်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးလို့ လူတိုင်းအမြင်မှာ ခံယူထားတဲ့ Song-Song couple ရဲ့ divorce သတင်းက newsfeed အပြည့်မို့ တုန်လှုပ်သွားခဲ့ရသော မင်မင်ပါ T.T
ကွာရှင်းဖို့ အရင်ဆုံး တောင်းဆိုတာက ဆောင်ဂျွန်ကီ လို့ သိရပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ရှေ့နေ ပါ့ခ်ဂျေဟွန်းကနေ တဆင့် ဆိုးလ်မိသားစု တရားရုံးမှာ ကွာရှင်းခွင့်ကို ဦးတိုက်လျှောက်တင်ခဲ့တာပါတဲ့။ Fan တွေ ပွက်လောရိုက်ကုန်မှာကို ကြိုမြင်လို့ ဆောင်ဂျွန်ကီက စာအပြည့်အစုံ ရေးပြီးတော့လည်း အသိပေးထားပါသေးတယ်။
“ ကျွန်တော် ဆောင်ဂျွန်ကီပါ။ ကျွန်တော်တို့ကို ချစ်ပေးပြီး ဂရုစိုက်ပေးနေတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် မမျှော်လင့်ထားတဲ့ သတင်းဖြစ်သွားတဲ့အတွက် တောင်းပန်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ဇနီး ဆောင်းဟေကျို ဆီကနေ ကွာရှင်းခွင့် တောင်းထားပြီး ရုံးတော်မှာ ကွာရှင်းသွားမှာပါ။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် လူသိရှင်ကြား ရှုံ့ချပြောဆိုပြီး အပြစ်တင် ငြင်းခုံနေရမှာထက်စာရင် ဒီကွာရှင်းခွင့်ကနေ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ပြေပြေလည်လည်နဲ့ ပြီးဆုံးသွားမယ် ထင်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အသေးစိတ်ကို ပြောပြဖို့က ခက်ခဲတာမို့ ပရိသတ်တွေ နားလည်ပေးဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ လက်ရှိ ခံစားနေရတဲ့ ဒဏ်ရာတွေကို ကုစားပြီးရင် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ မင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်လာအောင် ကြိုးစားပြီး ပြန်လည်ပေးဆပ်သွားမှာပါ။” လို့ တရားဝင် ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
Related Article>>>Song Joongki နဲ့ Song Hyekyo တို့ရဲ့ သီးသန့်မင်္ဂလာပွဲလေးမှ ပုံရိပ်များ
ဒီသတင်းကို rumors (ကောလဟာလ) ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းနေပေမဲ့ ပိုပြီး ခိုင်လုံသွားတဲ့ အချက်က ဆောင်းဟေကျိုက လက်ထပ်လက်စွပ်ကို လုံးဝ ချွတ်ထားတာပါပဲ။ ကိုရီးယားနဲ့ တရုတ် သတင်းဌာနတွေက သတင်းတွေကလည်း ဒီအချက်ကို အလေးပေးပြီး သတင်းလုပ်ထားတာဆိုတော့ ဒီလိုမျိုး တရားဝင် မကြေညာခင်တည်းက နှစ်ဦးသား မပြေလည်မှုတွေ များခဲ့တယ် ထင်ပါတယ် ယောင်းရေ 🙁
ဒီနေ့မှာပဲ ဆောင်းဟေကျိုရဲ့ အေဂျင်စီကလည်း ကွာရှင်းမယ့် ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တရားဝင် ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ကွာရှင်းရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ သူတို့တွေရဲ့ မတူညီတဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး (အကျင့်စရိုက်)တွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“စိတ်မကောင်းစရာ သတင်းနဲ့ နှုတ်ဆက်ရတာ သိပ်တော့မကောင်းပါဘူး။ သေသေချာချာ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ မင်းသမီး ဆောင်းဟေကျိုဟာ သူ့ရဲ့ ခင်ပွန်းနဲ့ ကွာရှင်းဖို့ ပြင်ဆင်နေခဲ့ပါပြီ။ ကွာရှင်းရတဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ သူတို့ရဲ့ မတူညီတဲ့ အကျင့်စရိုက်တွေကြောင့်ပါ။ နှစ်ဦးသားက ညှိနှိုင်းဖို့ ကြိုးစားခဲ့ကြပေမဲ့ မတူညီမှုတွေကိုတော့ မကျော်လွှားနိုင်ခဲ့တာမို့ ဒီ ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ထိ ဖြစ်လာကြတာပါ။ ဒီထက်ပိုတဲ့ အကြောင်းတွေကို ပြောပြလို့ မရတာကိုတော့ နားလည်ပေးဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။” လို့ ဆောင်းဟေကျိုရဲ့ အေဂျင်စီက သတင်းထုတ်ပြန်သွားပါတယ်။
ကိုယ်တွေရဲ့ မမလည်း မောင်လေးနဲ့ ပျော်ရွှင်နေပြီ ထင်ထားတာ။ ဒီလိုကြီးဆိုတော့ စိတ်မကောင်းဘူး… ယောင်းတို့ရော ဘယ်လို ထင်ကြလဲ?
Ei Mon (For Her Myanmar)
Reference: Soompi, Koreaboo
ဟဲ့… ပလုတျတုတျ စောစောစီးစီး ဘာတှလေား T.T
အိပျရာနိုးလို့ လိုငျးဖှငျ့ကွညျ့ရုံပဲ ရှိသေးတယျ။ တကျလာတဲ့ သတငျးက လုံးဝ shock ပဲ။ ကိုယျ နှဈရှညျလမြား ခဈြရတဲ့ မငျးသမီး ၊ လိုကျဖကျတဲ့ အိမျထောငျရေးလို့ လူတိုငျးအမွငျမှာ ခံယူထားတဲ့ Song-Song couple ရဲ့ divorce သတငျးက newsfeed အပွညျ့မို့ တုနျလှုပျသှားခဲ့ရသော မငျမငျပါ T.T
ကှာရှငျးဖို့ အရငျဆုံး တောငျးဆိုတာက ဆောငျဂြှနျကီ လို့ သိရပါတယျ။ သူ့ရဲ့ ကိုယျစားလှယျရှနေ့ေ ပါ့ချဂဟြှေနျးကနေ တဆငျ့ ဆိုးလျမိသားစု တရားရုံးမှာ ကှာရှငျးခှငျ့ကို ဦးတိုကျလြှောကျတငျခဲ့တာပါတဲ့။ Fan တှေ ပှကျလောရိုကျကုနျမှာကို ကွိုမွငျလို့ ဆောငျဂြှနျကီက စာအပွညျ့အစုံ ရေးပွီးတော့လညျး အသိပေးထားပါသေးတယျ။
“ ကြှနျတျော ဆောငျဂြှနျကီပါ။ ကြှနျတျောတို့ကို ခဈြပေးပွီး ဂရုစိုကျပေးနတေဲ့ ပရိသတျတှအေတှကျ မမြှျောလငျ့ထားတဲ့ သတငျးဖွဈသှားတဲ့အတှကျ တောငျးပနျပါတယျ။ ကြှနျတေျာ့ဇနီး ဆောငျးဟကြေို ဆီကနေ ကှာရှငျးခှငျ့ တောငျးထားပွီး ရုံးတျောမှာ ကှာရှငျးသှားမှာပါ။ တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ လူသိရှငျကွား ရှုံ့ခပြွောဆိုပွီး အပွဈတငျ ငွငျးခုံနရေမှာထကျစာရငျ ဒီကှာရှငျးခှငျ့ကနေ နှဈဦးနှဈဖကျ ပွပွေလေညျလညျနဲ့ ပွီးဆုံးသှားမယျ ထငျပါတယျ။
ကြှနျတေျာ့ရဲ့ ကိုယျရေးကိုယျတာ အသေးစိတျကို ပွောပွဖို့က ခကျခဲတာမို့ ပရိသတျတှေ နားလညျပေးဖို့ မြှျောလငျ့ပါတယျ။ ကြှနျတေျာ့ရဲ့ လကျရှိ ခံစားနရေတဲ့ ဒဏျရာတှကေို ကုစားပွီးရငျ ပိုမိုကောငျးမှနျတဲ့ မငျးသားတဈယောကျဖွဈလာအောငျ ကွိုးစားပွီး ပွနျလညျပေးဆပျသှားမှာပါ။” လို့ တရားဝငျ ကွညောခဲ့ပါတယျ။
Related Article>>>Song Joongki နဲ့ Song Hyekyo တို့ရဲ့ သီးသနျ့မင်ျဂလာပှဲလေးမှ ပုံရိပျမြား
ဒီသတငျးကို rumors (ကောလဟာလ) ဖွဈပါစလေို့ ဆုတောငျးနပေမေဲ့ ပိုပွီး ခိုငျလုံသှားတဲ့ အခကျြက ဆောငျးဟကြေိုက လကျထပျလကျစှပျကို လုံးဝ ခြှတျထားတာပါပဲ။ ကိုရီးယားနဲ့ တရုတျ သတငျးဌာနတှကေ သတငျးတှကေလညျး ဒီအခကျြကို အလေးပေးပွီး သတငျးလုပျထားတာဆိုတော့ ဒီလိုမြိုး တရားဝငျ မကွညောခငျတညျးက နှဈဦးသား မပွလေညျမှုတှေ မြားခဲ့တယျ ထငျပါတယျ ယောငျးရေ 🙁
ဒီနမှေ့ာပဲ ဆောငျးဟကြေိုရဲ့ အဂေငျြစီကလညျး ကှာရှငျးမယျ့ ကိစ်စနဲ့ ပတျသကျပွီး တရားဝငျ ကွညောခကျြ ထုတျပွနျခဲ့ပါတယျ။ ကှာရှငျးရတဲ့အကွောငျးရငျးကတော့ သူတို့တှရေဲ့ မတူညီတဲ့ ကိုယျရညျကိုယျသှေး (အကငျြ့စရိုကျ)တှကွေောငျ့ဖွဈတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
“စိတျမကောငျးစရာ သတငျးနဲ့ နှုတျဆကျရတာ သိပျတော့မကောငျးပါဘူး။ သသေခြောခြာ စဉျးစားဆုံးဖွတျပွီးတဲ့နောကျမှာတော့ မငျးသမီး ဆောငျးဟကြေိုဟာ သူ့ရဲ့ ခငျပှနျးနဲ့ ကှာရှငျးဖို့ ပွငျဆငျနခေဲ့ပါပွီ။ ကှာရှငျးရတဲ့ အကွောငျးရငျးကတော့ သူတို့ရဲ့ မတူညီတဲ့ အကငျြ့စရိုကျတှကွေောငျ့ပါ။ နှဈဦးသားက ညှိနှိုငျးဖို့ ကွိုးစားခဲ့ကွပမေဲ့ မတူညီမှုတှကေိုတော့ မကြျောလှားနိုငျခဲ့တာမို့ ဒီ ဆုံးဖွတျခကျြခဖြို့ထိ ဖွဈလာကွတာပါ။ ဒီထကျပိုတဲ့ အကွောငျးတှကေို ပွောပွလို့ မရတာကိုတော့ နားလညျပေးဖို့ မြှျောလငျ့ပါတယျ။” လို့ ဆောငျးဟကြေိုရဲ့ အဂေငျြစီက သတငျးထုတျပွနျသှားပါတယျ။
ကိုယျတှရေဲ့ မမလညျး မောငျလေးနဲ့ ပြျောရှငျနပွေီ ထငျထားတာ။ ဒီလိုကွီးဆိုတော့ စိတျမကောငျးဘူး… ယောငျးတို့ရော ဘယျလို ထငျကွလဲ?
Tags: Divorce, files, Song Hye Kyo, Song Joong Ki
မြန်မာ့ဂီတလောကမှာ အရမ်းဟော့ဖြစ်နေတဲ့ တေးရေး"ဝေကြီး"ရဲ့ သီချင်းကောင်းများ
Ei Mon June 27, 2019
ကျွန်မ တစ်ခုလပ် သို့သော် …….
Myat Moe September 16, 2018